CO-WIN (HK) shirkad xadidan, xirfadle wax saqafka caag ah soo saaraha, waxaa la aasaasay si ay u bixiyaan qalabka fiican saqafka caag ah oo tayo leh oo qiimo aad u tartan rasmi ah suuqa caalamiga ah la koox xirfadlayaal khabiir kuwaas oo bixiya adeegga ugu gaar ah si ay u caawiyaan ganacsigaaga koraan. waxyaabaha Our dabooli PC sheet jiingado, PC sheet adag, PC sheet godkii, ASA PVC sheet saqafka farcan weatherproof, ASA leben cusbi dardaro, 3 lakabka kulaylka dahaaran sheet saqafka UPVC, sheet FRP iwm
Kooxda & Experience In Industry Professional
Iyadoo kooxda xirfadeed iyo waayo-aragnimada 13+ warshadaha, kuwaas oo noo oggolaan in ay bixiyaan adeegga macaamiisha wax soo saarka kartoo iyo adeegga OEM. Waxaan ma aha oo kaliya bixiyaan alaabta oo tayo leh caymiska, sidoo kale waxay bixiyaan maamulka sahaydu dhamaystiran oo xaqiijinaya bixinta shixnad hufan. waxyaabaha lagu damaanad qaaday iyadoo 10-30 sano damaanad ku salaysan waxyaabaha kala duwan oo shixnad walba waa 100% baaray ka hor shixnad.
CO-WIN joogto ah ku dadaali doontaa in ay fiican nafteena si aan u weyneyno qancinta macaamiisha iyo caawiyo macaamiisha in ay ganacsi kharash-ool ah oo karti leh in suuqa caalamka. Waxaan rajeyneynaa in aad baaritaan iyo inaad la shaqayso si loo gaaro iskaashi guul-guul.